Gacha Life 1.0.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0.9 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Gacha Life
Gacha Life ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျသစ်တစ်ခုစွန့်စားမှုစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား သင့်ကိုယ်ပိုင် anime style အမျိုးမျိုးဇာတ်ကောင် Create နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးဖက်ရှင်မတ်မတ်၌သူတို့ကိုတက်ဝတ်စားဆင်ယင်! ဆင်မြန်းရာပေါင်းများစွာ, ရှပ်အင်္ကျီ, ဆံပင်ပုံစံတွေ, လက်နက်နှင့်အများကြီးပိုကနေရှေးခယျြပါ! သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းပြီးနောက်, စတူဒီယိုဝင်နှင့်သင်စိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်ဆိုမြင်ကွင်းတစ်ခုဖန်တီး! စုံလင်သောပုံပြင်ကိုဖန်တီးရန်တရာကျော်ကနောက်ခံကနေရှေးခယျြပါ!
ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများစူးစမ်းခြင်းနှင့်လမ်းတစ်လျှောက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြည့်ဆည်းဖို့အသစ်သောအသက်တာ mode ကိုရိုက်ထည့်ပါ! NPCs နှင့်အတူချတ်နှင့်သူတို့ကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ, သူတို့ကပင်သင်တစ်ဦးအံ့အားသင့်ပေးခြင်းငှါ,! သင်အကြိုက်ဆုံး Mini-ဂိမ်း Play နှင့်သင့်စုဆောင်းထားမှထည့်သွင်းဖို့ရှားပါးလက်ဆောင်တွေများအတွက် Gacha မှကျောက်မျက်စုဆောင်း! ဖြစ်နိုင်ခြေအဆုံးမဲ့များမှာ! မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? Gacha ဘဝသို့ဤနေရာသို့သွားရန်ယနေ့သင့်ရဲ့ခရီးကိုစတင်!
★နောက်ဆုံးပေါ် anime ဖက်ရှင်နှင့်သင်၏ဇာတ်ကောင်တက်ဝတ်စားဆင်ယင်! အဝတ်, လက်နက်, ဦးထုပ်နှင့်ထို့ထက် ပို. ရာပေါင်းများစွာရောထွေးနှင့်ကိုက်ညီ! အခုဆိုရင် 20 က Character slot နှင့်အတူ!
★သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြည့် Customize! သင့်ရဲ့ဆံပင်, မျက်စိ, ပါးစပ်နှင့်ထို့ထက် ပို. ပြောင်းနည်း!
Gacha စတူဒီယိုနှင့် Gachaverse အတွက်တစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးခဲ့★နယူးပစ္စည်းများ, ဖြစ်စေ, နှင့်ပိုပြီး!
★စတူဒီယို Mode တွင်သင့်ကိုယ်ပိုင်မြင်ကွင်းများ Create! သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်အဘို့အထုံးစံစာသားကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသော pose နှင့်နောက်ခံကနေရှေးခယျြ!
★ပု Skit သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်များ Make! အလွယ်တကူပုံကြမ်းကိုဖန်တီးရန်မျိုးစုံမြင်ကွင်းများပေါင်းစပ်!
★ထိုကဲ့သို့သောမြို့, ကျောင်းနှင့်ထို့ထက် ပို. အဖြစ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများ Explore!
★သစ်ကို NPCs ရှာဖွေရန်နှင့်သူတို့၏ဘဝများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်သူတို့နှင့်အတူ chat!
★အော့ဖ်လိုင်း Play! အဘယ်သူမျှမက Wi-Fi ကိုကစားရန်လိုအပ်နေပါသည်!
★ထိုကဲ့သို့သော Duck & Dodge သို့မဟုတ် Phantom ရဲ့ Remix အဖြစ် 8 ကွဲပြားခြားနားသော Mini-ဂိမ်းများကိုမှရွေးပါ!
★သင်၏စုဆောင်းမှုထည့်သွင်းဖို့ 100 ကျော်လက်ဆောင်များစုဆောင်း Gacha!
★အခမဲ့2Play စ, သင်အလွယ်တကူကျောက်မျက်ရတနာများအတွက်စိုက်ပျိုးနိုင်သည်!
★ Chat နှင့်သင့်ထုံးစံကိုယ်ပွားကိုအသုံးပြုပြီးကမ္ဘာအနှံ့ကစားသမားနှင့်အတူ Roleplay!
- ဒီဂိမ်း 4k ဖန်သားပြင်နှင့်အတူဖုန်းအဟောင်းတွေ & ကိရိယာများပေါ်တွင်အဲလိုဘဲဖြစ်နိုင်တယ်။
- In-App ကို-ဝယ်ယူအန်းဒရွိုက် 6.0+ ထုတ်ကုန် / အမြစ်တွယ် device များအတွက်အလုပ်လုပ်မပြုစေခြင်းငှါ
Gacha ဘဝကကစားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် !!!
http://facebook.com/Lunime: Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲ
Facebook မှာ Group မှ: http://www.facebook.com/groups/GachaLife/
Gacha Life အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Gacha Life အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Gacha Life အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
treogstore စတိုး 75 297.06k
Gacha Life ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Gacha Life အခ်က္အလက္
လက်မှတ် SHA1: 15:CB:D2:9A:53:20:27:07:E7:66:DB:B5:EC:DB:EB:62:A8:8D:75:D0
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Luni Mobi
အဖွဲ့အစည်း (O): Luni Mobi
Gacha Life APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ